ညီနေမင်း: hp deskjet f300 အတွက် ဖြေရှင်းချက် .
သူသူ "HP Deskjet F300 Series InkJet Printer Resetter လေး လိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ရရင် တင်ပေးပါဦးနော်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။"
printer ၀ယ်သုံးချင်သူများကို သတိပေးချင်တာကတော့ . ဘယ်တော့မှ all in one series ကို မသုံးပါနဲ့ . ကိုကတော့ all in one ဆိုတာနဲ့ printer တစ်လုံးကို ၀ယ်လိုက်တာနဲ့ scanner, copy, print out စတာတွေအားလုံးကို ရမယ် ဆိုတာနဲ့ ၀ယ်လိုက်ရေ . ၀ယ်တုံးကတော့ all in one ကွ ပေါ့ မကြာပါဘူး ပြဿနာက စပြီ . ဓါတ်ပုံတစ်ပုံကို ဖတ်လိုက်ရင် ၀ါးတားတားဖြစ်ရတာနဲ့ copy ကူးရင် black and white ကိုကူးပါတယ်ဆို အပြာရောင်လိုလိုထွက်လာရတာနဲ့ . မျိုးစုံ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ပြဿနာ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ် . f-300 ရဲ့ ဒုက္ခပေးမှုလေးကို ပြောပြပါ့မယ် . သူအဓိက ပေးတဲ့ဒုက္ခက auto restetter ပါတဲ့ ink cartridges ကို ၀ယ်ပြီးတော့ ထည့်လဲထည့်လိုက်ရော တစ်ချို့ printer တွေမှာ အဆင်ပြေပေမယ့် . တော်တော်များများက4ရောင်ရှိတဲ့အထဲက တစ်ရောင် အမြဲလွတ်နေတတ်တယ် . အိုကေသွားပြီပဲထား ထုတ်လို့ပြုလို့ အဆင်ပြေနေတယ် . နောက်ထပ်တစ်ခု ထပ်လာတယ် ဘာလဲဆိုတော့ ဆေးသိပ်မလိုက်တာ . printer ink တွေရဲ့ 80% မှာ ဆေးရည်အမဲရောင်ဟာ အခဲမြန်တယ်ဗျ . သတိထားမိမလားမသိဘူး . နောက်တစ်ခုက ကိုက printer ဆေးမလိုက်လို့ head cleaning လုပ်လိုက်ပြန်ရင်လဲ ဆေးက nozzle မှာ ဆေးခဲပြီး ပိတ်နေတဲ့အခါ ဆေးရည်က over ဖြစ်ပြီးတော့ printer အတွင်းထဲမှာ ဆေးတွေ လျှံကျသွားရော . အဲ့ဒီ့နေရာမှာတော့ epson က သာတယ် . အခုနောက်ထွက်တွေမှန်သမျှ ink over အတွက် ပိုက်တစ်ခု နောက်မှာပါတယ် . cleaning လုပ်လိုက်လို့ over ဖြစ်သွားရင် အဲ့ဒီ့မင်က ပိုက်ထဲကနေ အပြင်ကိုဆင်းသွားတယ် .အဲ့တော့ ကိုက laserjet ကို မသုံးနိုင်လို့ ink jet ကိုသုံးမယ်ဆိုရင် မင်အမဲရောင်ကို တစ်လတစ်ကြိမ်လောက် စစ်ဆေးပေးပါ . လှုပ်ကြည့်လိုက်ပါ . မင်အမဲရောင်ခဲနေပြီဆိုရင် ဆက်မသုံးပါနဲ့ . လှုပ်လိုက်လို့ အရေက တစ်ခြားဆေးရည်တွေလို လှုပ်လိုက်တာနဲ့ အိုကေတယ်ဆို ဆက်သုံးပါ မင်ခဲတော့မယ်ဆိုတာနဲ့ လှုပ်လိုက်ရင် ကော်ရည်မဖြစ်တဖြစ်လို သိပ်ပြီးတော့ မလှုပ်တော့ပါဘူး . နဲနဲပျစ်သွားတယ် . အဲ့လိုဆိုရင် မင်အမဲကို ဆေးထိုးအပ်စလင်းနဲ့ စုပ်ထုတ်လိုက်ပြီးရေနဲ့ဆေးလိုက်ပါ . ရေကိုအခြောက်ခံပြီး အားလုံးအိုကေပြီဆိုမှ မပျစ်တဲ့ဆေးရည် (ဆေးရည်အကောင်း)ကို စလင်းနဲ့စုပ်ပြီး catridge ထဲကိုထည့်ပါ . ဒါကကြုံတုန်းလေးပြောပြတာပါ . printer ကို ၀ယ်တော့မယ်ဆိုရင် . (ဆေးရည်ဝယ်တော့မယ်ဆိုရင် အမဲရောင်ကို လှုပ်ကြည့်ပါ အရည်က ကျဲနေမှသာဝယ်ပါ . ဆိုင်မှာထားထားလို့ ကြာလာရင် ပျစ်နေရင် မ၀ယ်ပါနဲ့ .. အဲ့တော့ ဆေးရည်ဝယ်မယ်ဆိုရင် မ၀ယ်ခင် နဲနဲလောက်လှုပ်ကြည့်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့ .)
all in one ကို ဘယ်တော့မှ မ၀ယ်ပါနဲ့
One way ကိုပဲသုံးပါ (သဘောက print ထုတ်ဖို့အတွက်ပဲ သီးသန့်ထုတ်ထားတဲ့ printer မျိုးကိုသုံးပါ)
scanner ကိုဝယ်တော့မယ်ဆိုရင်လဲ scan ဖတ်ဖို့ တစ်ခုတည်းထုတ်ထားတဲ့ scanner ကိုပဲ ၀ယ်ပါ .
all in one က ခဏတဖြုတ်အဆင်ပြေပေမယ့် ရည်ရှည်မှာဆိုရင် သူ့ရဲ့ Out put quality က one way တွေလို မမီပါဘူး .
နောက်ဆုံးပြောပြချင်တာက မသူသူရေ . မသူသူ printer အတွက်တော့ resetter က software ရှာမတွေ့ဘူး . သူ့အတွက် cartridges auto resetter တစ်ခါတည်းပါတဲ့ ဆေးဗူး4ဗူးတွဲ ရှိပါတယ် . အဲ့ဒီ့ဆေးဗူးကို ၀ယ်လိုက် . ရန်ကုန်မှာပေါပါတယ် . အဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် .
အကောင်းဆုံး နှင့် သုံးလို့အဆင်ပြေဆုံး printer ကို ညွှန်းပါဆိုရင်တော့ Epson R?? အမျိုးအစားတွေက အကောင်းဆုံးပါပဲ . ရုပ်ထွက် အဆင်ပြေသလို သူ့ရဲ့ error ကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရတာလဲ လွယ်ကူတယ် . နောက်ကြုံမှ printer တစ်လုံးကို ထိန်းသိမ်းနည်းဆိုပြီး ရေးပေးပါဦးမယ် . ရေးပေးချင်တာတွေကများပြီး အချိန်က သိပ်မရဖြစ်နေတာ . တစ်ချို့ကတော့ အကူအညီကတော့ အချိန်တိုင်းတောင်းနေတယ် . ကျွန်တော့်ပို့စ်များကို ကူးယူဖို့အတွက် ကျွန်တော့်ဆီက ခွင့်ပြုချက်မယူလဲ စိတ်မဆိုးပါဘူး . ကျွန်တော့်တို့ မြန်မာတွေမှာ တစ်ခုတော့ကောင်းတယ် . တစ်ယောက်ကသာ ရှေ့ကနေ လမ်းဖောက်ပေးလိုက် အနောက်ကနေ သိပ်မကြာဘူး လိုက်လာကြတယ် . အခုလဲကြည့် မြန်မာ ၀ဘ်ဆိုက်တွေ တစ်ဟုန်ထိုး တိုးတက်လာကြတာ ၀မ်းသာစရာပါ . အဲ့ဒီ့အတွက် ရှေ့ဆုံးကနေ လမ်းပြခဲ့တဲ့ လူတွေကို ရင်ထဲကနေ ကျေးဇူးတင်သင့်တယ် . တစ်ချို့က ဇော်ဂျီဖောင့်က စံမဖြစ်ဘူး . ဘာဖြစ်တယ် ဘာဖြစ်တယ်လုပ်ကြတယ် . ကျွန်တော့်အနေနဲ့ အဲ့လို စံဖြစ်တာ မဖြစ်တာကို ဘေးမှာထားပြီး ကျေးဇူးတင်တာက ဇော်ဂျီနဲ့ ၀ဘ်ဆိုက်တွေစရေးတယ် . ဇော်ဂျီနဲ့အပြိုင် တစ်ခြားဖောင့်တွေပေါ်လာတယ် . အဲ့ဒါဘာ့ကြောင့်လဲ မခံချင်စိတ် အပြင် ရှေ့ကလုပ်တဲ့သူထက် ပိုကောင်းရမယ် ပိုအဆင့်မြင့်ရမယ်ဆိုတဲ့ ခံယူချက်ပဲ. အဲ့ဒါကြောင့်မို့ ပိုပြီးတိုးတက်လာတယ်လို့ ကျွန်တော်တော့ ခံယူတယ် . ဘယ်လိုပဲပြောပြော ကျွန်တော့်အမြင်ကတော့ ၀ဘ်ဆိုက်တွေမှာ ကနဦးစပြီးရေးလို့ရအောင် လမ်းကြောင်းပေးခဲ့တာ ဇော်ဂျီပါ . တစ်ခြားစံဖြစ်တယ် မဖြစ်တယ်ဆိုတာက တစ်ဖြည်းဖြည်းချင်း ပြောင်းလဲယူလို့ရပါတယ် . လူငယ်တွေ ၀ဘ်ဆိုက်တွေ ရေးချင်လာအောင်၊ မြန်မာစာနဲ့ ဖတ်လို့ရလာအောင် စပြီးဆွဲဆောင်ခဲ့တာ ဇော်ဂျီပါ . ကျွန်တော့်ရင်ထဲကနေ နှစ်နှစ်ကာကာကျေးဇူးတင်ပါတယ် .
Posted by ညီနေမင်း at 8:38 AM
Labels: Answers, printer service program